Nnukwu ememme osimiri na-eme n'obodo mepere emepe n'ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nnukwu ememme osimiri na-eme n'obodo mepere emepe n'ụwa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • Akụkọ Ọchịchị • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
The Onye na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Ghana, n'aha Gọọmentị nke Ghana, na Event Horizon, ndị na-ahazi Ememme Afro-Nation, na Mọnde, 20 Jenụwarị 2020, bịanyere aka na Memorandum of Understanding maka Ghana iji kpọọ "nnukwu egwu osimiri osimiri obodo mepere emepe n'ụwa" afọ ise na-esote.
MoU nke nke Maazi Akwasi, onye isi oche nke Ghana Tourism Authority (GTA), na Obi Asika, onye isi oche nke Event Horizon bịanyere aka na ya, bụ onye President nke Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, na London, gbara akaebe na akụkụ nke nzukọ Uk-Africa Investment Summit.
Binye aka nke MoU bụ akụkụ nke ọtụtụ atụmatụ Ghana na-etinye, ka ọ na-amalite ọrụ "Beyond the Return" oru.
Ebumnuche nke ọzọ gafere itinye aka na ndị Africa nọ na mba ndị ọzọ na ndị niile sitere n'Africa na mpaghara dịka azụmahịa na mmekọrịta ego, yana nka na mmepe ihe ọmụma.
MoU ga-ekwekwa ka Ghana Tourism Authority na gọọmentị ọ bụla, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ikike ọ hụrụ na ọ dị mkpa, na nnọchite Gọọmentị nke Ghana, na-ahụ maka atụmatụ niile, ọdịnaya na mmepụta nke ngwa ahịa maka Afro-Nation Ghana Project.
Ndi otu a ekwenyewokwa, na nkwadebe maka ihe omume kwa afo, iguzobe Kọmitii na-ahazi Mpaghara, gụnyere ndị nnọchi anya nke otu ọ bụla ma ọ bụ ndị mmekọ ha maka Afro-Nation Ghana Project na LOC, n'etiti ọrụ ndị ọzọ, ka ekwupụta. na akwụkwọ edere maka ọrụ nkwado maka ọrụ ọzọ.
N’okwu ya, ka e binyechara MoU ahụ, Obi Asika kwuru na “Ghana bụ ebe na-anabata ndị ọbịa, anyị nwere a happyụrị na nnabata a na-ekpo ọkụ anyị natara kemgbe anyị wegara Afro-Nation n’obodo ahụ. Ntinye aka Onye isi ala na oru ngo a enweghị atụ, anyị na-atụ anya maka mmemme ọzọ ga-aga nke ọma na Disemba 2020 ”.
N'akụkụ ya, onye isi oche nke Ghana Tourism Authority (GTA), Akwasi Agyeman kwuru na "Afro-Nation bụ otu n'ime ihe omume dị mkpa anyị na-agbakwasị ụkwụ na 'Beyond the Return'. Anyi choro ime ka Ghana buru ebe nlere anya na Afrika. Disemba na Ghana agaghị adịkwa ọzọ ”.
Akụkọ ndị ọzọ eTN na Ghana.